အာဖဂန်မှာ ရုပ်ပွားတော် ဖျက်တာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေလား ? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Please help stop attacks on Islam in Myanmar
My 6th. brother SMAR Nyi Nyi’s songs »
[မှတ်ချက် – စာရေးသူ၏ အမြင်နှင့် အာဘော်သာဖြစ်သည်]
This entry was posted on May 17, 2012 at 9:37 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “အာဖဂန်မှာ ရုပ်ပွားတော် ဖျက်တာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေလား ?”
May 17, 2012 at 2:21 pm | Reply
FB of Maungmaung Skw
ဒီလောက်ပြောနေ အော်နေ ရေးနေ ဆဲနေတာကို
သောက်ရှက်မရှိဘူး မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ရာထူးတွေယူထားကြတယ်။
ကိုယ်ပြည်သူအချင်းချင်း ဘာတာဝန်မှ မရှိတဲ့သူ အချင်းချင်း ကူညီဖြေရှင်းနေရ တယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှဘဲ စကားပြောကြမှာလား။
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဘယ်ကြောင်မသာမှာ ကြည်နူးနေကြ